အမျိုးသမီးများဆံပင်ဆက်စပ်ပစ္စည်း, ကလေးများ မှစ. ဆံပင်ဗီဒီယိုအပိုင်းအစများ - Weizhong
။ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း။ နမူနာ & မှို Developers ။
။ ဆံပင်စျခှငျ & လက်ဝတ်ရတနာထုတ်လုပ်သူ။
။ လက်ကား & လက်လီ။
။ သတ္တု hairornament နှင့်ဖက်ရှင်လက်ဝတ်ရတနာ industriy အတွက် automated prodution လိုင်း၏ 70% နဲ့ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်စေရန်။
. နောက်ကျောကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှ E-commerce ဆိုင်ရောင်းချသူတက်သည်, ငါတို့သူတို့ဝယ်လက်တရုတ်ထံမှသင်္ဘောကုန်ပစ္စည်းများ drop ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဆံပင်ကလစ်ပ်တစ်ဦးဦးဆောင် automated ထုတ်လုပ်သူဖြစ်အပ်လော့။
ယခုသင့်အကြိုက်ဆုံးကိုရယူပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းအရောင်းဆိုင်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ လက်ကားလက်လီ။
ဆံပင်အဆင်တန်ဆာ, လက်ကောက်, ပုတီး, လည်ဆွဲ, လက်ကောက်, ကွင်း။
NOW ကဝယ် >>
ဆံပင် / လက်ဝတ်ရတနာပစ္စည်းများ
ဗီဒီယို / ဗီဒီယိုစင်တာ
Weizhong ထုတ်လုပ်သူ establsih 2003 ခုနှစ်ကတည်းကများနှင့် 17 နှစ်အတွေ့အကြုံနဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အဆင်တန်ဆာများနှင့်သတ္တုလက်ဝတ်ရတနာထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤကာလအတွင်းကုမ္ပဏီ၏လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစဉ်အတွင်းကျနော်တို့အနေနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့လူကြိုက်များအခြေခံစံနှုန်းအဖြစ် Raising ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဒေါ်လာလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်3သန်းပေါင်းများစွာနှင့်အတူ 300 + န်ထမ်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ Dongyang စီးတီး, Goshan လမ်းမကြီးတွင်တည်ရှိသည်, လက္ကားစတိုးဆိုင် Yiwu နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးစီးတီး၏ Futian ဈေးကွက်၌တည်ရှိ၏။ ကုမ္ပဏီအဓိကအားဖြင့်ဆံပင်ကလစ်များ, လည်ဆွဲ, ပုတီး, ကွင်း, လက်ကောက်, ထိုမှပါး၏ထုတ်ကုန်အတွက်စေ့စပ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဖောက်သည်ရွေးချယ်ဖို့ 10000 နီးပါးစတိုင်များရှိပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းများဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, အရှေ့အလယ်ပိုင်း, တောင်အမေရိက, အရှေ့တောင်အာရှတင်ပို့နေကြသည်။ ဖောက်သည်များကမျက်နှာသာအဝတ်အစားကုမ္ပဏီများနှင့်စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်မှုန်ဆောင်မှုများကိုအဓိကက e-Commerce ပလက်ဖောင်းအိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာလူသိများအမှတ်တံဆိပ်၏နံပါတ်နှင့်စားသုံးသူချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ကျယ်ပြန့်အရေအတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာ။ 2003 ခုနှစ်တွင်စက်ရုံများ၏တည်ထောင်ကတည်းကကျနော်တို့လွတ်လပ်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေးအခေါ်လိုက်နာ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီယခုနီးကပ်စွာဥရောပနှင့်အမေရိကန်, ဂျပန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်အချက်အလက်များ၏အခြားနိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်အတူပေါင်းစည်းတစ်ဦးက high-quality ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ရှိပါတယ်, နှင့်အဆက်မပြတ်နောက်ဆုံးပေါ်အများစုသော authoritative ဖက်ရှင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဖောက်သည်များကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးနှုန်းများ, အရည်အသွေးအာမခံချက်, ကောင်းသောဂုဏ်သတင်း, စဉ်ဆက်မပြတ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်အတူဖက်ရှင်စတိုင်ကျနော်တို့ကစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တသမတ်တည်းကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုအနိုင်ရနိုင်အောင်။ ဆံပင်ကလစ်ပ်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင် higt ဂုဏ်သတင်းနှင့်အတူဦးဆောင် aotumatic ကျော်ကြားထုတ်လုပ်သူဖြစ်အပ်လော့။
လိုင်းပေါ်မှာဆံပင်များနှင့်လက်ဝတ်ရတနာများအတွက်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်ကက်တလောက် p ...	Post ကိုအချိန်: 09-30-2019 S ကို ... ၏ဖက်ရှင် jewlery များအတွက်အပတ်စဉ် update လုပ် catalog	Post ကိုအချိန်: 08-28-2019 နယူးရောက်ရှိဆံပင်ကလစ်ပ်သြဂုတ်လများအတွက်	Post ကိုအချိန်: 08-28-2019 ဆံပင်အဆင်တန်ဆာများအပတ်စဉ် update လုပ် catalog	Post ကိုအချိန်: 01-21-2019 Globalso နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး	Post ကိုအချိန်: 11-07-2018
4th Floor, အမှတ် 56, ChangChun6လမ်း, Yiwu စီးတီး, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်
ယခုကျွန်တော်တို့ကို Call: 86-579-89354606
အသားပေးထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - မိုဘိုင်းဆိုက်ကို အမျိုးသမီးများနေ့သည်ဆံပင်တံသင် , ဆံညှပ်အစုံ, Hair Ornaments From China, မိန်းကလေးများသည်ဆံပင်ဗီဒီယိုအပိုင်းအစများ, Hair Accessories, အမျိုးသမီးများဆံပင်ဆက်စပ်ပစ္စည်း ,